Torolàlana momba ny orinasa kely amin'ny fifehezana ny haino aman-jery sosialy Martech Zone
Torolàlana momba ny orinasa kely amin'ny fifehezana ny haino aman-jery sosialy
Zoma, Aogositra 30, 2013 Douglas Karr
Mbola tsy resy lahatra aho fa ny orinasa rehetra dia vonona hampiasa vola amin'ny tetikady media sosialy. Misy orinasa toa an'i Apple izay manana marika tsy mampino, dokam-barotra mahafinaritra, ary vokatra tsara izay mitarika marketing amin'ny alàlan'ny vondron'olona mpampiasa. Apple dia tsy mila mavitrika amin'ny haino aman-jery sosialy mba ho tafavoaka velona sy hiroborobo. Ny orinasa hafa dia eo amin'ny faran'ny mifanohitra amin'ny ambaratonga, miaraka amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa sy ny mpanjifa. Ny fisorohana ny haino aman-jery sosialy dia mety ho tetika tsara mandra-panafahan'izy ireo manamboatra ny fizotrany sy ny vokariny.
Saingy, ho an'ny orinasa maniry ny hisambotra ny tsenan'ny tsena, hanangana fahefana, hanangana fitaomana ary hampitombo ny orinasan'izy ireo, ny media sosialy dia fomba iray lafo vidy sy ezaka mafy hanaovana izany. miteny aho ambony ezaka satria mila fotoana sy fanoloran-tena avy aminao sy ny ekipanao hamokarana atiny sy manome lanja hampitomboana ny mpihaino anao ary hananganana vondrom-piarahamonina iray. Marina indrindra izany amin'ireo orinasa madinidinika izay tsy manana loharanom-bola hividianana ny dokambarotra ilaina hitombo.
Nanjary zava-dehibe amin'ny drafitry ny varotra orinasa kely ny media sosialy! Ny fanontaniana maharitra dia: "ahoana no ahafahan'ny orinasanao mahazo tombony betsaka amin'ny marketing media sosialy?". Jereo ao amin'ny The Small Business Guide to Social Media Mastery, infographic vaovao mitondra anao MarketMeSuite ary Placester!
Vita tsara ny fitantanana ny fiaraha-monina
Skoto fanampiana: ampio ny serivisy ho an'ny mpanjifa azo esorina amin'ny tranokalanao